Landa ukuqaqa i-06 (1) FS2004 - Rikoooo
Play 9 954
Isimo sokuqala sokuthutha isikhala eCape Canaveral. Futhi kufaka phakathi i-3 AI, bayobe bekhona endaweni. Izikebhe nazo zifakwe kule phakheji ngaphandle kwesikhangiso sokuqalisa. Sicela uqaphele ukuthi i-shuttle ihamba ngokushesha lapho kuqaliswa khona indawo ye-FS2004. Iphinda futhi ngemva kwemizuzu ye-2. Emva kwalokho kufanele ulinde imizuzu ye-12 ukuze uyibuke futhi emoyeni. Kumele ulinde amaminithi we-12 noma uvale i-FS9 bese ukhetha iKapa Canaveral entsha.
Isexwayiso: Kufanele, uma usufakiwe, memezela indawo e-FS2004. Umfakisi ngeke akwenze ngokuzenzakalelayo.
Yiya kuzilungiselelo zomtapo wolendawo> vula ifolda "I-Addon Scenery"> Cinga i- "Shuttle Launch 06" chofoza u- "Kulungile" ukuqalisa kabusha i-FS2004> I-SCENERY INSTALLED